भ्रष्टाचारी नेता, हरुलाई खुल्ला चुनौती दिने प्रेमप्रसाद सञ्जेल सेवाबाट सधैका लागी भय बिदा ! अब जापान जाने सों चमा – Taja Khawar
भ्रष्टाचारी नेता, हरुलाई खुल्ला चुनौती दिने प्रेमप्रसाद सञ्जेल सेवाबाट सधैका लागी भय बिदा ! अब जापान जाने सों चमा
प्रकाशित मिति: आइतबार, आषाढ २०, २०७८ समय: ०:१०:०१
काठमाडौ । राज्य संयन्त्रलाई खुला चुनौती दिने प्रेमप्रसाद सञ्जेल सधैका लागी निजामती सेवाबाट बिदा भएका छन ।
राज्य संयन्त्रलाई खुला चुनौती दिएका सञ्जेल सेवा अवधीको उतरार्धमा निकै चर्चामा रहे । श्रम कार्यालय विराटनगरमा हाजिर भएलगतै सरुवा भएका उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लल्कारेर चुनौती दिए । राजनीतिक पहुँचका आधारमा हाजिर भएको तीन महिनामै सरुवामा परेपछि सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर काममा फर्किए । मंगलबार सोही कार्यालयबाट अवकास लिएका छन् ।
जापान जाने सोच
२०३९ साल फागुन ३ गते खरिदार हुँदै निजामती सेवा प्रवेश गरेका सन्जेल २०४६ साल असार २७ गते नायब सुब्बमा बढुवा भए ।
‘राजादेखि राष्ट्रपतिलाई गाली’
४० वर्र्षे सेवा अवधीमा सञ्जेल राजतन्त्र र गणतन्त्र दुवै व्यवस्था कार्यान्यवन गर्ने तहमा बसेर काम गरे । आफ्नो सेवा अवधीमा राजादेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई गाली गर्न सकेको उनी बताउँछन् । ‘सेवा अवधीमा गलत काम गर्दा राजादेखि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक रुपमा गाली गरें’ उनले भने, ‘तत्कालीन राजा विरेन्द्रकी आमा रत्ना राज्यलक्ष्मी बाल संगठनको अध्यक्ष हुँदा विरोध गरें, त्यसबेला सेनाले कुट्यो, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्न डराइन्न ।’
निजामती सेवामा रहँदा भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाए पनि सुधार नआएको उनले बताए । तर आफू जहाँ बस्यो त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन नदिएको उनको दाबी छ । ‘भ्रष्टाचार गर्ने धेरैको जागिर खाइदिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘सेवा अवधीमा जुन अफिसमा बसें त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन दिइनँ ।’
‘प्रेम सञ्जेलले घुस खाएको परको कुरा माग्यो भने कुन हातले माग्यो, त्यही हात काटेर दिन्छु भनेको छु,’ उनले थपे, ‘दुई वर्ष मोटामोटी श्रम कार्यालयमा काम गर्दा १९ जनाको जागिर खाइदिएँ । सुधार त्यसै हुँदैन नी ।’
सञ्जेलले तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयमा करिब ६ वर्ष काम गरे । ६ वर्षे अवधीमा ६ जना प्रधानमन्त्री, १३ मन्त्री र ६ जना सचिवसँग काम गरे । सेवा अवधीमा शान्ति मन्त्रालय लामो अवधी काम गरे ।
२०६३र६४ मा उनी पशु सेवा विभागमा कार्यरत थिए । अनुदानको रकममा भ्रष्टाचार देखिएपछि २३ जना स्थायी कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाए । लगत्तै सरुवा भयो । सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर १९ महिना विभागमै रहे ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मोरङमा रहँदा पनि अनियमितता गर्ने पाँच जना स्थायी कर्मचारीलाई कारवाही गरी जागिरबाट हटाएको उनले बताए ।
निर्वाचन कार्यालय मोरङमा रहँदा उनले हाजिर नगरी तलब बुझ्यो भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्यो । अख्तियारमा उजुरी पर्दा उनी गलेनन् उल्टो कारवाही गर्न चुनौती दिए । अनुसन्धान गर्दा तलब भुक्तानी कानुन अनुसार नै देखियो ।
सेवा अवधीमा कतिपटक अदालत गए भन्ने लेखाजोखा नभएको उनले बताए । ‘अदालत त कति पटक गएँ त्यसको रेकर्ड नै छैन’ उनले भने, ‘तीन महिना वैदेशिक रोजगार सम्बन्धीको मुद्दा हेर्दा ३ करोड १० लाख असुल गरेर एक सय १० जनालाई जेल पठाएको छु, म विरुद्ध कति वटा मुद्दा परे हिसाब किताब गरेको छैन ।’
सुधार गर्न चाहेको कुरा
निजामती सेवामा प्रवेश गरेकाहरुले अवकासको कागजपत्र मिलाउन केन्द्रीय किताबखाना काठमाडौं नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । अवकासको प्रकृयाका नाममा वार्षिक राज्यस्रोतको करोडौं रकम खर्च हुने उनले बताए ।
‘निजामती सेवा प्रवेश गरेका कम्तीमा २ हजारले प्रत्येक वर्ष अवकास पाउँछन् । प्रहरी, सेना, शिक्षक, संघ संस्थान विश्वविद्यालययबाट अवकास पाउनेको संख्या सोही अनुसार छ,’ उनले भने, ‘यी निकायको अवकास प्रकृया झन्झटिलो र धेरै खर्चिलो पनि भयो ।’
कार्यालयबाटै अवकासको सबै प्रकृया पूरा गर्न सकिने भएपनि व्यक्ति काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यताले राज्यस्रोतको खर्च बढाएको उनले बताए । ‘व्यक्तिले अवकासको प्रकृया मिलाउन काठमाडौं आउ–जाउ राज्य स्रोतको पैसाले गर्छन्, मेरो दिनको टीएडीए एक हजार ६ सय हुन्छ,’ उनले भने, ‘म जस्तै सबै टीएडीए लिएर काठमाडौं जान्छन्, वार्षिक कतिले सिध्याउँछन् अवकास अघि टीएडीएको नाममा राज्य स्रोतको रकम
प्रविधिको प्रयोग गरेर सम्बन्धित जिल्लाबाटै अवकासको प्रकृया पाउने व्यवस्था गरे सहज हुने उनले बताए । सुधारको थालनी गरौं भन्दा नसकिएको उनको गुनासो छ ।
‘वर्षमा दश हजार जति रिटायर्ड हुन्छन्, राउण्ड फिगरमा काठमाडौं आउ–जाउको टीएडीए मात्रै एक जनाले ३० हजार लिन्छन्’ उनले अघि भने, ‘पेन्सन पट्टाको प्रकृया रिटायर्ड हुनुभन्दा ६ महिना अघि सुरु गरेर काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिनुपर्छ । तर ४० वर्ष भिड्दा सुधार गर्न सकिएन, त्यस्तो निजामती सेवालाई थुक्क नभनेर के भन्ने रु’
उनका अनुसार नेपालको अवकास प्रकृया परम्परागत शैलीको छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर सहज बनाउन सके राज्य स्रोतको ठूलो खर्च जोगिन्छ ।
‘रिटायर्डको प्रकृया पूरा गर्न गाह्रो छैन । निजामती किताबखानाले खाली पेन्सन पट्टा पठाइदिने र सम्बन्धित अफिसले भर्ने, अफिसले गर्न नसक्ने भए कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पठाइदिने । त्यहाँबाट पेन्सन पट्टा पूरा गरेर पठाइदिने,’ उनले भने, ‘अहिले विदा र औषधिको विवरण लिन किताबखाना पुग्नुपर्छ, त्यहाँबाट पैसा लिन सम्बन्धित जिल्लाको कोलेनिका पुग्नुपर्छ । किताबखानाले गर्ने काम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा दिंदा हुन्छ नि, कोलेनिका त सबै जिल्लामा छन् ।’-धनकुटाखबरबाट।
Last Updated on: July 4th, 2021 at 12:10 am